Mpanamboatra fatana kompania - mpamatsy sy orinasa mpamokatra fanatanjahantena any China
Alumiunm Alloy mpankafy fatana
Fitaovana: Alumiunm firaka
Alumiunm Alloy mpiorina lafaoro Fitaovana: Alumiunm AlloyAnodization processBlades Color: Mainty / volafotsy / volamena / mena mena / vy fotsy / nickelIas: LxH: 157 * 108 * 223mm NW: 0,52 kg GW: 0.77kg Ny fototr'antsy sy ny lelany dia vita amin'ny aliminioma, nify tsy manam-pahoviana tsy harafesina na harafesina amin'ity mpiorina fatana hazo ity dia natao hamoahana onja mafana be dia be. Ny mpakafy fatana dia mamokatra herinaratra avy aminy amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny maripana. Bimetall ...
Mpankafy fatana Alumiunm Alloy
Fitaovana: Alumiunm AlloyAnodization processBlades Colour: Mainty / volafotsy / volamena / rose mena / vy fotsy / nickelMeas: LxH: 135 * 103 * 197mm NW: 0.63 kg GW: 0.86kg Ny fototr'akanjo sy ny lelany dia vita amin'ny aliminioma, lelam-bolo anodized manokana izay dia tsy harafesina na harafesina amin'ity mpiorina fatana hazo ity izay natao hamoahana onja mafana be dia be. Ny mpankafy fatana dia mamokatra herinaratra avy aminy amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana. Ny vy ao am-pototry ny mpankafy dia kofehy Bimetallic natao ho Rai ...
Fanala amin'ny fatana Alumiunm AlloyMaterial: Alumiunm AlloyAnodization processBlades Color: Mainty / volafotsy / volamena / mena mena / vy fotsy / nickelMeas: LxH: 135 * 103 * 197mm NW: 0.63 kg GW: 0.86kg Tsy dia tsara ireo vokatra mpankafy. Miankina amin'ny moto ao anatiny matetika izany. Raha mora simba ny motera dia tsy mety ny mividy na manamboatra azy io indray, ary ny vidiny dia mitovy amin'ny mividy iray hafa. Ny motera ataontsika dia tariby varahina * * * * avokoa, ary tariby varahina miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana avo. Tsy varahina mahazatra izy ireo ...
Fanala amin'ny fatana Alumiunm Alloy
Alumiunm Alloy Stove FanMaterial: Alumiunm AlloyAnodization processBlades Colour: Mainty / volafotsy / volamena / rose mena / vy grey / nickelMeas: LxH: 140 * 110 * 250mm NW: 0.97 kg Ny fototr'antsy sy ny lelany dia vita amin'ny aliminiôma, lelam-bolo tsy manam-paharoa izay tsy harafesina na harafesina amin'ity mpiorina fatana hazo ity dia natao hamoahana onja mafana be dia be. Ny mpankafy fatana dia mamokatra herinaratra avy aminy amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana. Ny vy ao am-pototry ny mpankafy dia Bimetallic strip des .. .
Alumiunm Alloy Stove FansMaterial: Alumiunm AlloyAnodization processBlades Colour: Mainty / volafotsy / volamena / rose mena / vy grey / nickelMeas: LxH: 140 * 110 * 250mm NW: 0.97 kg Ny fototr'antsy sy ny lelany dia vita amin'ny aliminiôma, loko tsy manam-paharoa izay misy tsy harafesina na harafesina amin'ity mpiorina fatana hazo ity dia natao hamoahana onja mafana be dia be. Ny mpankafy fatana dia mamokatra herinaratra avy aminy amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana. Ny vy ao am-pototry ny mpankafy dia Bimetallic strip des .. .